Kenya: Maqaayadle Shiineys ah oo Afrikanka takooray – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kenya: Maqaayadle Shiineys ah oo Afrikanka takooray
A warsame 24 March 2015 24 March 2015
Mareeg.com: Milkiilayaal u dhashay dalka Shiinaha oo maqaayad aad loo tago ku leh mahaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenaya ayaa ku kacay fal loo arkay medab takoor iyo xadgudub ka dhan ah dadka Afrikaanka ah, kadib markii ay dadkaas baarkooda ka mamnuuceen wixii ka dambeeya 5-ta galabnimo.
Booliska Kenya ayaa xiray milkiilayaasha baarkaas, iyagoo sidoo kale albaabbada isugu dhuftay maqaayaddaas oo ku taalla bartamaha magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya..
Zhao Yang oo ka mid ah labada ruux ee la xiray ayaaba loo heystaa inuu baarka furay isagoo aan wax ogolaasho ah haysan, sida uu qoray wargeyska The Daily Nation ee Kenya kasoo baxa.
Arrintaan Afrikaan diidka ah ee ay ku kaceen milkiilayaasha Shiineyska ah ayaa aad uga careysiisay dadka Kenaynka ah iyo dadka kale ee Afrikaanka ah.
Dadka Kenyanka ah oo baraha bulshada uga hadlay falka ay ku kaceen ganacsatada Shiinaha ah ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in dadkaasi ogaadaan ineysan joogin Shiinaha ee ay joogaan Kenya.
Esther Zhao oo wax ka leh maqaayadda ayaa u sheegay warbaahinta in go’aanka ay dadka Afrikaanka ah xilliga habeenkii uga mamnuuceen uu ahaa mid ay ku sugayeen amniga goobtooda ganacsiga.
Milkiilayaasha maqaayada ayaa sheegaya in arrintan ay sameeyeen kadib markii sanadkii hore la dhacay maqaayadda, sidaas darteedna aanay kala garan karin wixii ka dambeeya 5-ta galabnimo dadka Afrikaanka ah ee maqaayada ka cunteynaya, kuwa weerada geysanaya iyo kuwa wax dhacaya.
Sidoo kale ganacsatadan Shiineyska ah ayaa sheegay iney cabsi qabaan weerarada ka dhacaya Kenya ee ay geysato Al-Shabaab, iyadoo weliba safaaradda Shiinaha ee Nairobi ay ka soo saartay maqaayadaas digniin ah in la weerarayo, sida ay qoreen Warbaahinta gudaha ee Kenya.
“Ma kala garanayno dadka Afrikaanka ah, waayo ma garanaysid midka kooxda Al-shabaab ka tirsan iyo midka aan ka tirsanayn,” ayay tiri Zhao.
Wuxuu sheegay ineysan dooneyn iney cid gaar ah takooraan ama riixaan, wuxuuna yiri “Innagu marnaba ma doonayn inaan cid gaar ah riixno.”
Milkiilyaasha Shiineyska ah oo la sheegay inay yihiin lamaane ayaa la filayaa in Khamiista soo socota la soo taago Maxkamad, iyadoo lagu soo oogayo kiis la xiriira iney maqaayadda furteen ruqsada la’aan, waxaana dad badan is weydiinayaan sababta loogu maxkamadeyn waayey iney midab kala sooc ku dhaqaaqeen.
Lamaanayaashan Shiineyska ah ayaa haddii lagu helo in ay maqaayadda furteen ruqsad la’aan ay mudan doonaan 18-sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $1,000 dollar.
Madaxweyne Xasan oo markale tegay Dhuusa Mareeb
Dowladda Somalia oo cambaareysay dowladda Sweden